Medin oo dib dalka ugu soo laabtay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Suxufi, Joakim Medin oo dalka dib ugu soo laabtay. Sawirle: Shaho Mwany / Radio Sweden Kurdiska
Medin oo dib dalka ugu soo laabtay
La daabacay onsdag 25 februari 2015 kl 15.18
-"Aad baan ugu farax-sanahay inaan dib dalkaygii ugu soo noqdo" - sidaa waxaa sheegay sufuiga Joakim Medin oo dhowaantan laga soo daayey qafaalasho dhowr maalmood ah oo lagu haystay dalka Suuriya, mar uu shir jaraa'id ku qabtay daarta shirarka huteelka Clarion ee garoonka caalamiga ee Arlanda.
Joakim Medin iyo suxufi aey wada shaqeeyni ka dhexeeysay ayaa dhowaantan 15-kii bishan feeberaayo oo eynu ku jirno lagu qabtay magaalada Qamishli oo dhacda waqooyi bari ee dalkaasi Suuriya, isagoona muddadaa wixii ka horeeyay uu 15 maalmood ku sugnaa dalka Suuriya si uu war-bixin uga soo sameeyo xaaladda haweenka ee carrigaasi. Medin ayaa lagu tuhun-sanaa inuu dalka Suuriya ku galay isaga oo taageero ka helaya waddammada Turkiga iyo Israa'iil.
Qafaalashada gacanta lagu dhigay ayuu ku macneeyay inay ka dambeeysay nasiib-darro iyo la filaan isku soo aadey iyo sidoo kale ciyaarta siyaasadeed ee maamulka Suuriya uu ciyaarayo. Medin, wuxuu kaloo aamin-san yahay in qabashadiisa ay ka dambeeysay in maamulka Suuriya uu tijaabinayay awoodda xoogagga kurdida, iyo in la diro dhambaal ah in aaney cid suxufiyiin ah ka howl-geli karin carrigaa si ay uga war-bixiyaan, sida uu sheegay Joakim Medin.